Raiso 1 nanendry VP amin'ny Varotra ankapobeny - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Raiso 1 nanendry VP an'ny Varotra Global
Raiso 1 nanendry VP an'ny Varotra Global
CRANBROOK, KENT - Oktobra 7, 2019 - Broadcast metadata sy ny orinasa transkrip, Raiso ny 1, dia namorona lefitra lefitry ny varotra eo amin'ny varotra eran-tany mba hampitomboana ny toeran'ny mpanjifa iraisam-pirenena. Claire Brown dia natsangana ho amin'io toerana vaovao io miaraka amin'ny asany avy hatrany, taorian'ny niasa tao amin'ny orinasa nandritra ny telo taona ho lasa mpitantana varotra.
Tonga ny hetsika raha manomboka manomboka ny fanodinana ny Take 1 vao haingana Raiso ny rahona 1, sehatra vita marika azo novolavolaina hamelana ireo atody fampitaovana horonan-tsary mirindra mankany amin'ny tranon'ny mpanjifan'ny orinasa manerantany ary manaraka azy ireo Ny fanitarana amerikana tany Connecticut tamin'ny Oktobra 2018.
Niaraka tamin'i Take 1 i Brown tamin'ny Janoary 2017 taorian'ny andraikitra teo aloha teo amin'ny BBC Digital, National Geographic Channel, Fox International Channels ary Red Bee. Hatramin'ny nanendrena azy ho mpandraharaha ara-barotra, dia nanitatra ny serivisy ireo orinasa ankoatry ny fanodinana mba hampiditra ny famaritana ny audio, ny sary nalaina ary ny dikanteny ary ny fahitana am-pahombiazana ny fandefasana ireo sora-tanana lehibe indrindra.
ary ny fandikana ny indostrian'ny fahitalavitra amin'ny tantaran'ny orinasa tamin'ny Oktobra 2018. Satria ny VP amin'ny varotra eran-tany Brown dia hitantana ny ekipa varotra iraisampirenena, mampifandanja ny fotoanany eo anelanelan'ny toby telo an'ny orinasa any Amerika sy ny biraon'izy ireo any UK. Hanao tatitra amin'ny Tale Jeneralin'ny Take 1, Louise Tapia, tamin'io fotoana io, no nitarika ny orinasa amerikanina.
"Ny traikefa eo amin'ny sehatry ny indostrian'i Claire, ny sehatry ny fandraharahana sy ny fivarotana varotra dia mahatonga azy ho mpikambana sarobidy ao amin'ny ekipan'ny Take 1 ary toetra tena ilaina amin'ny andraikiny vaovao," hoy ny filoha lefitra 1, Louise Tapia. "Manana finoana tanteraka aho amin'ny fahaizany mitarika ny ekipa varotra iraisam-pirenena rehefa manohy manitatra ny serivisy isika ary mikaroka tsena vaovao eran-tany."
Jereo ny tafatafa nifanaovana tamin'i Claire tamin'ny IABM amin'ny IBC 2019 Eto.
Fantaro bebe kokoa amin'ny www.take1.tv
Momba ny 1
Raiso ny 1 mahatonga ny horonantsary azo idirana amin'ny alàlan'ny famohana ny herin'ny teny. Ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny metadata transkriptera ary manome transcript, serivisy serivisy, fandikana ary fandikan-dalàna aorian'ny famokarana amin'ny orinasan'ny famokarana, studio, mpivarotra fizahan-tany ary tamba-jotra manerana an'izao tontolo izao. Take 1 dia manana lova 20 taona ao amin'ny indostrian'ny fandaharana ary laza ho an'ny fanomezana serivisy haingana, azo itokisana ary ny mahitsy.
Lahatsoratra farany nataon'i Candice Cowan (jereo rehetra)
Raiso 1 nanendry VP an'ny Varotra Global - Oktobra 7, 2019
famaritana feo fampitana injeniera fampitana Engineering Claire Brown Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor toerana Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC Raiso ny Transcription 1 Ultra HD Forum Video injeniera	2019-10-07
Previous: Notendren'ny MediaKind i Allen Broome ho Lehiben'ny Teknolojia
Next: Ny Joanne Rourke avy any Deluxe ao Toronto dia manampy amin'ny famantaran'ny mpahay siansa ao anaty "Maintso"